Kenya oo shaaciyay Tirada lagu Dilay Weerar ka dhacay Dalkeeda |
Kenya oo shaaciyay Tirada lagu Dilay Weerar ka dhacay Dalkeeda
dapoxetine without prescription, lioresal without prescription. Warbixin dheer oo ay soo saartay Dowlada Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in Weeraradda argagaxiso ee dalkeeda ay ka fuliso Xarakada AL-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta iyo dagaal beleedyadda gobalo Kenya ka tirsan ka dhaca sida Gobalka Waqooyi Bari ee Kenya oo bilihii danbe ay laba Maleeshiyo beleed ay ku dagaalamayeen ay ku dhinteen laga so bilaabo bishii January ilaa bishan aan ku jirno ee June in ka badan 150 qof oo kenyaan ah.
Warbixinta Dowlada Kenya ayaa tusaaale waxaa loogu soo qaatay in Bishii May oo kaliya 12 qof lagu dilay halka 78 kale uu dhaawac ka soo gaaray weerar qaraxyo loo adeegsaday oo ka dhacay Suuqa Gikomba ee Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Warbixinta Kenya ay soo saartay ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in todobaadyadii ugu danbeeyay oo kaliya dad ku dhawaad 100 qof lagu dilay weeraro is xig xigay oo ka dhacay Degaanka Mpekotoni ee dhaca Jaziirada Lamu ee dalka Kenya, Weeraraddaas oo Masuuliyadooda ay sheegatay Xarakada AL-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta.
Taliyaha ugu sareeya Ciidamada Boliiska Kenya David Kimaiyo oo Warbixintan lagu soo xigtay ayaa sheegay in Baaritaano iyo xog u ruurin la sameeyay lagu ogaaday in dagaal beeleedyadda dalka Kenya ka dhaca ay maalgaliyaan Siyaasiin, ganacsato iyo dad dana gaar ah leh.
Mr. Kimaiyo ayaa sheegay in dowladiisa ay mudo waday olle la doonayo in looga hortago Weeraradda Argagaxiso iyo dagaal beeledyadda Kenya ku soo la laabtay , isagoo xusay in dowlada ay sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto xakamaynta Weeraradda ay dadka Kenyaan ah ku dhimanayaan ee dalka Kenya ka dhaca.